Ragga T-Shirt, Haweenka T-Shirt, Dharka Fuulitaanka Gawaarida Gaaban ee Gaarka ah - Pinyang
LOGO-ga loo kala bixin karo Cotton Ragga Isboortiga ...
12-16 Sano jir Wiil Gacmo Dheer oo T-Shirt ah PY-TC003
Daabacaadda Galmada Isboortiga Gaaban ee Haweenka T-Shirt ...
Astaanta Astaanta Gaarka ah ee Dumarka 'Hoodie PY ...
24 ceht. 2015 г. 12:50:27 0 Faallo Maamulka Admin
Marka lagu daro xaaladda hadda jirta ee en ...
Bishii Abriil 16, dharka Pinyang wuxuu helay amar ah 3000 qaybood, oo si guul leh loo gaarsiiyey 29th. Tirada qeybtaan amarada ah aad ayey uyartahay, waxayna ubaahantahay todobo midab. Waxay qaadataa 12 saacadood hal midab inuu dheeho iyo saddex maalmood toddobada midab. Waxa kale oo ay u baahan tahay inay dhammaystirto var ...
Dharka Pinyang wuxuu abuuraa wax ...
Amarada kaliya labo ama seddex dhar waa la aqbali karaa Sababta oo ah soo dhexgalka Alibaba ee "warshadda wiyisha", isbadalka caqliga badan ee warshadaha soosaarka dharka ayaa noqday mawduuca ugu kulul ee warshadaha markale. Xaqiiqdii, tan iyo markii moodada dharka caalamku ...
Qaadashada baahiyaha dhalinyarada sida d ...
Oktoobar 6, 2020, tobanka subaxnimo. Qaadashada dharka sida diiradda u-soo-saarka sheyga, booqo aqoonta ku habboon iyo astaamaha dharka. Galabnimadii, waaxda maareynta ayaa kala soocday waxyaabaha la xiriira waxayna isugu yeertay shaqaale ku habboon si ay u sharaxdo aragti ahaan
Bishii Oktoobar 2020, waxaa la go'aansaday in loo daayo ...
Bisha Oktoobar 2020, si aan si fiican u taageerno fikradda iyo "u janjeedha dadka", waxaan siin doonnaa macaamiisheenna adeegyo tayo leh. U oggolow macaamiisha inay helaan xulashooyin badan waxayna go'aansadeen inay u oggolaadaan kooxdooda inay kaqeyb qaataan barashada tikniyoolajiyadda cusub. Waxay bilaabi doonaan inay waxbartaan Oktoobar 6th, sidaa darteed ...
Si si wanaagsan loo hirgeliyo maareynta caatada ah, loo hagaajiyo xirfadaha hawlgalka, loona ballaariyo fikradaha shaqada, Maarso 15, 2020, soo-saarka shaqaalaha safka hore ayaa loo abaabulay si ay u qabtaan tababar daba-gal ah oo toddobaad soconaya. Nuxurka ugu muhiimsan ee daraasaddan waxaa ka mid ah laba qaybood: awoodda shaqada ee ...